Duqa Talyaani wuxuu ku hanjabay inuu diro dab-damiyayaal la dagaallama coronavirus: Martin Vrijland
Duqa Talyaani wuxuu ku hanjabay inuu diro dab-damiyayaal si loola dagaallamo coronavirus
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 26 Maarso 2020	• 14 Comments
Waa maxay wejiga dhabta ah ee nidaamka ku faafaya siyaasadaha iyo warbaahinta iyada oo lala kaashanayo mucaarad xaddidan? U fiirso astaanta qaansoroobaad. Qaansoroobaadku miyuu astaan ​​u yahay amarka adduunka cusub? Dunidu miyuu daadku ku ruxmay mawjad mooryaan ah oo la mid ah wakhtigii Nuux? Maxaa dib u billowday daadadkii ka dib? Qaansoroobaad?
"Waxaan u dirnaa dab-damiyayaal!" Ayuu ku qayliyay duqa magaalada Talyaaniga.
Hadda waxaan wali u maleyneynaa inaanan u qaadanin tan macno ahaan, laakiin maxaa dhacaya haddii tani ay u dhici doonto macno ahaan? Bal fiiriya luqadda hanjabaada ee ka imaanaysa afka duqa magaaladan. Wasiirka Grapperhous miyuu sidoo kale bilaabi doonaa inuu la macaamilo coronavirus 'mid aan la xakamayn karin' oo 'wuxuu ka baxayaa gacanta' warbaahinta? "Sababtoo ah adigu ma dhagaysan doontid oo ha joogin!"
Ma xasuusataa digniintan laga bilaabo Noofembar 2019?
Buuggayga iyo qodobo badan (oo bilaash ah ayaa wax looga aqrin karaa) oo ku yaal goobta waxaan ku sharraxay in qaansoroobaadku ay tahay astaantii amarka adduunka cusub: arooryadow. Amarka adduunka cusub wuxuu ku dadaalayaa adduunyo sida Lucifer. Astaanta Lucifa waa Baphomet-ka: hermaphrodite (androgynous ama 'dhexdhexaad jinsi') chimera Bu (akhri halkan qaar chimerism waa).
Waan iska celiyay oo waxaan idhi, Bal eeg, kanu ma aha filim. Ma tihid Will Smith gudaha I Am Legend. Guriga tag. ”
Kani waa aruurinta la cusbooneysiiyay ee Maayorsiyaasha Talyaanigu lumiyeen markii ay xadgudbeen # Wadaag19 karantiil. Haa, qoraal hoosaadyadu waa sax. pic.twitter.com/60V4Csuonb
Vincenzo De Luca, Duqa Magaalada Talyaaniga ee Campania
Buugga laga bilaabo 2016 Indhaha mugdiga ee Dean Koontz wuxuu ka hadlayaa fayraska loo yaqaan 'bioweapon virus' ee Wuhan-400
Trump, Q-Anon iyo 'nadiifinta fikirka' qoto dheer '(Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Cusbooneysiinta xirida 'Coronavirus covid-19': Markaad toostid oo aad ogaato inaad ku jirtid, maxaad sameyn kartaa?
Gobol booliis ah oo ka xun Nazi Jarmalka ayaa ku soo dhacaya sida yey oo ku jirta dharka idaha mana arki kartid
Coronavirus COVID-19 masiibada: fayras, bioweapon ama hoax dib u dejinta maaliyadeed iyo xakamaynta guud?
Tags: duqa magaalada, coronavirus, de, featured, Italiaanse, Talyaaniga, Luca, ilaaliyo, qaansoroobaad, buugga roobka, ka, Vincenzo, ololayaal
26 Maarso 2020 at 10: 26
Waqtiga aan hadda ku jirno? Daqiiqad 3:17 fiidiyaha
26 Maarso 2020 at 23: 49
Waxaan u maleynayaa horaantii 3:30 aroornimo marka qof ku hanjabo inuu ku dhici doono mid ka mid calaamadaha Corvid.
Xaraare Xareed ayaa qoray:
26 Maarso 2020 at 11: 30
Ciyaar qaar ka mid ah cayaaraha fiidiyaha, ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha xoojinta sharciga.
Qaar ka mid ah aqoonyahannada, oo ay ku jiraan WHO, ayaa hadda sheegaya in "riyo weyn oo dhab ah" ay soo ifbaxayaan halka “cayaaraha” lagu horumariyo oo si weyn loo hagaajiyo, iyada oo dadka ku jira qolka ay ku nool yihiin lagu qasbay ama loogu yeero "iskaa wax u qabso" gooni u goosad ah Caalamka ayaa u dhaqaaqi kara kuwa aan lagaran karin waxa dhabta ah. Xitaa barnaamijyada waxbarida waxaa lagu bixin karaa carruurta iyadoo loo marayo aduunyo caalami ah sidaa darteed mustaqbalka uma sii fiicnaanayaan hadda inay aadaan dugsi laakiin waxay u sii gudbi doonaan “fasal toos ah” halkaas oo ay casharo uga heli karaan carruurta kale macallin macallimiin ah oo runtii wax bara, iyo waxa aan dhabta ahayn waa la kala saari karaa.
Waxaa la sheegay in la rajeynayo in mustaqbalka dhow dadka ay lahaan karaan si joogto ah oo karantiil ah maxaa yeelay fayruusyada ayaa kusii kordha, laakiin xaqiiqda muuqata tani dhib ma leh gabi ahaantiina dadku xitaa ma doonayaan inay dibadda aadaan maxaa yeelay dunidaa dalxiiska ah halkaasoo Waxay ku kulmi karaan gabi ahaanba wixii aan kala sooceyn karin oo ah waxa dhabta ah.
Markaa transhumanism sidoo kale si aad ah ayaa loogu dallacsiiyaa waxa loogu yeero qufulka iyo go'doominta isla markaana goor dhow wuxuu noqon doonaa mid aad u caadi ah oo aad u horumarsan.
26 Maarso 2020 at 12: 03
Ilmaha yari hada waxaa la baray sida loo raaco bears. Ku beddela kuwa orso 'walxaha hanjabaada' maxaadse ku aragtaa barnaamijkaas?
Willem S ayaa qoray:
26 Maarso 2020 at 13: 00
Shaqaalaha kalkaalinta caafimaadka iyo dadka leh shaqooyinka muhiimka ah ee hargab qabta si sahlan ayey u shaqeyn karaan.
26 Maarso 2020 at 13: 24
Inta badan guryaha howlgab ee Nederland waxay ku leeyihiin lambar sir ah oo albaabka ka baxsan. Xaaladaas, qofka weyn ayaa ka furi karin albaabka gudaha. Taasi waa tikniyoolajiyad casri ah. Haddii coronavirus la tuhunsan yahay, albaabka waa la xiri karaa. Badanaa waxaa ku yaal meel lagu xannaaneeyo oo ku ag taal guriga daryeelka dadka da'da ah. Ka dib oo dhan, waa saldhigga ugu dambeeya. Caruurtu mar dambe ma soo booqan karaan. Qufulka Nasiib wanaagse, waxay ku kalsoonaan karaan daryeel wanaagsan. Shaqaalaha kalkaalinta waxay si fiican ula dhaqmaan borotokoolka waxayna suuragal ah inay ku sii hayaan dadka waayeelka ah cudurka qaba qolkooda .. haddii kale waxaad halis ugu jirtaa infekshin (oo waa in lagaa takhalusaa) ama in dadka waayeelka ah ay cudurka qaadaan ... adigu taas ma dooneysid. Foomka ka soo noqda sheybaarka ayaa mararka qaar dhahaya "coronavirus positive". Waa wax laga xumaado in la xiro qof sidan oo kale ah, laakiin haa .. ”Waa inay noqotaa, maahan wax lagu farxo, laakiin yaa diidi kara natiijada sheybaarka? Waxaad ku dhegan tahay borotokoolka… ”
Sidee Harry Mens dhab ahaan ahaan doontaa?
26 Maarso 2020 at 13: 26
26 Maarso 2020 at 15: 39
Hagaag, Vincenzo de Luca. Sidoo kale ma mid baa jira. Iyaguna waxay ku jiraan jagooyin muhiim ah gudaha Talyaaniga. Waxkasta waa mid caalami ah iskuna dubbaridaa Hen. Waxay wax walba u arkaan, waxay go'aansadaan wax walba, Waa caadi, Iyaga waa khabiiro, Iyagu waa saxaafadda, Iyagu waa gacanta xoogga leh, iwm Waxaan si fudud ugu jirnaa kaligii taliye xukumaya Them. Sidee ayaynu dadka caadiga ah uga takhalusnaa iyaga?
Ahaanshaha qof ayaa qoray:
26 Maarso 2020 at 17: 34
Marka hore waxaan jecelahay inaan kaaga mahad celiyo qodobbada fahanka badan ee sanadihii la soo dhaafay. Si aad u taageerto shaqadaada, laakiin sidoo kale nuxurka buugga, waan amrayay. Waxaan rajeynayaa in qof kasta oo dhulka jooga uu muraayadda ka eegi karo waxa uu qabanayo isla markaana si qoto dheer ula yaaban yahay nuxurka nolosha.
Waxaan u rajeynayaa qof walba xoog badan, xigmad iyo caafimaad oo dhan waqtigan adag.
JHONNYNIJHOFF@GMAIL.COM ayaa qoray:
26 Maarso 2020 at 22: 40
Tijaabada viruska Corona waa been abuur!
27 Maarso 2020 at 07: 09
Kaliya qayb muhiim ah iyada oo loo marayo isku xirnaanta iyada oo loo maro jhonny lifaaqan.
CDC-PCR-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Qiimaynta dhabta ah ee waqtiga-RTR PCR-ga waa tijaabada dhabta ah ee loo yaqaan 'RT-PCR' oo loogu talagalay in lagu ogaado astaamaha loo yaqaan 'nucleic acid' laga soo bilaabo 2019-nCoV ee tijaabooyinka sare ee neefsashada sare iyo kan hoose (sida nasopharyngeal ama oropharyngeal swabs, xaakada, hawo-mareenka hoose ee neef-mareenka, lafa-mareenka bronchoalveolar, iyo nasopharyngeal wash / aspirate ama sanka aspirate) laga soo uruuriyay shaqsiyaadka la kulma 2019-nCoV kiliinikada iyo / ama astaamaha cudurada faafa (tusaale ahaan, calaamadaha kiliinikada iyo astaamaha la xiriira 2019- Infekshanka nCoV, la xiriirida suurtagal ama la xaqiijiyey kiiska 2019-nCoV, taariikhda safarka meelaha juquraafi ahaan ah halkaasoo laga helay kiisaska 2019-nCoV, ama xiriirinno kale oo la xiriira baaritaanka 2019-nCoV oo lagu tilmaami karo inay qeyb ka tahay baaritaanka caafimaadka dadweynaha). Tijaabinta gudaha Mareykanka waxay ku xadidan tahay sheybaarada shahaadada lagahelay Isbadellada sheybaarka kor u qaadida sheybaar ee 2019 (CLIA), 1988 USC § 42a, in lagu sameeyo tijaabooyin isku dhafan sare.
Natiijooyinka waxaa loogu talagalay aqoonsiga 2019-nCoV RNA. Noocyada 'nCoV RNA' ee 2019 guud ahaan waa laga ogaan karaa muunadaha neefsashada ee sare iyo hoose inta lagu jiro jeermiska. Natiijooyinka togan waxay tilmaan ka yihiin infekshanka firfircoon ee 2019-nCoV laakiin meesha ha ka saarin infekshinka bakteeriyada ama la-qaadista fayrasyada kale. Wakiilka la ogaado waxaa laga yaabaa inuusan aheyn sababta rasmiga ah ee cudurka. Shaybaarrada shaybaarada ee gudaha Mareykanka iyo dhulalkeeda waxaa looga baahan yahay inay u soo sheegaan dhammaan natiijooyinka wanaagsan masuuliyiinta caafimaadka dadweynaha ee ku habboon.
Natiijooyinka diidmada ahi kama horjoogsanayaan infakshanka 2019-nCoV mana aha in loo isticmaalo saldhigga daaweynta ama go'aannada kale ee maaraynta bukaanka. Natiijooyinka xun waa in lagu daraa kormeerid caafimaad, taariikhda bukaanka, iyo macluumaadka cudurka faafa.
Kama faa iideysano baaritaanka viruska. Sidee loo dajiyaa qorshaha daaweynta iyo daawooyinkahee loo isticmaalaa? Borotokool? Waxay la mid tahay tijaabinta bukaanka dhakhaatiirta iyo aragtida haddii daaweyntu ay tahay tan saxda ah. Su'aashu waxay tahay bukaanku uma bukoodo sababtaas darteed. Faham in dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadku aysan had iyo jeer xirtaan maaskaro oo ay markaa xitaa cudurka u gudbin karaan bukaannada corona. Mararka qaarna waxay sii wadaan shaqadooda inta ay iyagu laftooda leeyihiin corona. Bukaanka miyay ugu dambeyn u dhiman doonaan miro-dhuuban ama wax kale? Cui Bono? Sida saxda ah, injineerada bulshada ee adduunka ee horumarinaya.
ellysa ayaa qoray:
27 Maarso 2020 at 00: 36
@ martin Marka lagu daro (qaabdhismeedka) sumadda farriinta, sidoo kale fiiro gaar ah u yeelo jirka jirka / muujinta muuqaalka hogaamiyahan ama dhibbaneyaasha.
Maqnaanshaha dareenka iyo damiirka, ujeedka dhabta ah ayaa lagu muujiyaa wejiga
Sidoo kale caan ku ah waxa wadnaha ka buuxa…
Wadnaha Luciferian wuxuu isku muujiyaa indhaha / muuqaalka wejiga iyo luqadda jirka.
Sababta oo ah jiritaanka “meel indha la '” ee maskaxdeenna ku sugan, waxaan u qaadaneynaa (waxaan u dhacnaa soojeedinta) in maamulka saaxiibtinimo uu yahay qof saaxiib / qalbi leh. Micnaha dhabta ah ee qiimaha wajiga.
Waxaan nimid waqti marka shakhsiyada (persona = maaskaro) ay muujiyaan wajigooda dhabta ah.
Isku xirkaani wuxuu bixiyaa tilmaamo qoto dheer iyo tusaalooyin. Muuqaalka garashada miyirka.
Dhinac ahaan: AI waa fikir aad u macquul ah ama halkii laga heli lahaa nuqul ka mid ah awoodaha aadanaha. Kombiyuutar muhiim maahan in (h) la aqoonsado runta. Laakiin illaa iyo inta qof walbaa uusan dib u soo ceshan aqoonsigiisa dhabta ah (maskax fikir), wuxuu sii wadi doonaa inuu duceysto maamulka dibedda.
28 Maarso 2020 at 07: 33
Gordon Brown wuxuu ku baaqayaa dowladda adduunka inay wax ka qabato coronavirus
Ra’isulwasaarihii hore ee bartamihii 2008 bangiyada badbaadintu waxay soo jeedinayaan in la hawl geliyo hogaamiyaasha iyo khubarada caafimaadka
haa, ajandaha tuhmanayaasha caadiga ah ayaa si isa soo taraya u soo socda
« Trump, Q-Anon iyo 'nadiifinta fikirka' qoto dheer '(Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Ragga ragga ahi ma yihiin bartilmaameedka ugu weyn ee coronavirus? Aasaaska sayniska »
Guud ahaan Wadarta: 1.223.967
Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, xiritaanka qotada dheer iyo xiritaanka internetka 1-da Abriil?
Ragga ragga ahi ma yihiin bartilmaameedka ugu weyn ee coronavirus? Aasaaska sayniska
Abderrazak Samir op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, xiritaanka qotada dheer iyo xiritaanka internetka 1-da Abriil?
Martin Vrijland op Ragga ragga ahi ma yihiin bartilmaameedka ugu weyn ee coronavirus? Aasaaska sayniska
Martin Vrijland op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, xiritaanka qotada dheer iyo xiritaanka internetka 1-da Abriil?
Killumimati 777 op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, xiritaanka qotada dheer iyo xiritaanka internetka 1-da Abriil?
Marcos op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, xiritaanka qotada dheer iyo xiritaanka internetka 1-da Abriil?